नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा, कारोवार रकम १७ अर्ब | Investopaper
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च स्थानमा पुगेको छ । यस्तै, कारोवार रकम पनि झण्डै रु. १७ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । कोराना कहर र निषेधाज्ञाले बजारलाई प्रभावित पार्न नसक्नुको पछाडि प्रविधिको प्रयोगलाई लिइएको छ । विद्युतीय रूपमा नै घरमै बसेर सहज रूपमा शेयर कारोवार हुन पाएका कारण विषम अवस्थामा समेत उल्लेखनीय इतिहास कायम भएको लगानीकर्ताको विश्लेषण छ । (रासस)
नेप्सेमा आज २९.५५ अङ्कले वृद्धि भई दुई हजार ८५६.६७ मा पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ७.९६ अङ्कले बढेर ५१३.११ मा पुगेको छ । कुल २१८ कम्पनीको तीन करोड ४६ लाख ९१ हजार ३१२ कित्ता शेयर रु. १६ अर्ब ९० करोड ७० लाख २० हजार २८६ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । साताको कारोवार हुने अन्तिम दिन बिहीबारको कारोवारपछि बजार पूँजीकरण रु. ३९ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड २१ लाख ५१ हजार ९९९ बराबर पुगेको छ । बजार पूँजीकरण पनि हालसम्मै उच्च भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
कारोवारका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी शीर्षस्थानमा छ । सो कम्पनीको रु. एक अर्ब दुई करोड ७० लाख २७ हजार २८७ बराबरको कारोवार भयो । यस्तै, छिमेक लघुवित्त विकास बैंक रु ६८ करोड १६ लाख ५० हजार १५९, लुम्बिनी विकास बैंक रु ३५ करोड पाँच लाख ९२ हजार ६०२, नेपाल बंगलादेश बैंक रु ३३ करोड २२ लाख ७० हजार ७३६ र नेपाल पूर्वाधार बैंकको रु ३३ करोड १३ लाख ८६ हजार ७७४ बराबरको कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
← इजरायलको राष्ट्रपतिमा आइज्याक हर्जोग निर्वाचित
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको पहिलो यानसेतु विमानस्थल बन्दै →